जनवरी 1, 2017 नोभेम्बर 16, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments केटी, मन पराएको
केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने लक्षणहरु ! लौ है केटा साथीहरु हो बिभिन्न माया-प्रेमका खोज तथा अनुसन्धानको ब्यापक अध्ययन गरी तपाईंहरु माझ यो लेख प्रस्तुत गरेका छौ । भरपुर फाइदा उठाउनुहोस । आफूले मन पराएको केटी रोज्ने र उनैसँग जीवन बिताउने सपना प्राय सबै छोरा मान्छेले देखेकै हुन्छन् । केटाले सकेसम्म केटीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न आफ्ना कुरा गर्ने तरिका तथा आफू प्रस्तुत हुने तरिकाका बारेमा सजग हुनु जरूरी हुन्छ । भनिन्छ, महिलालाई चिन्नु असम्भव जस्तै कुरा हो । महिलाका सबै लक्षण तथा प्रतिक्रियाहरु अविश्वसनीय तथा दुर्वोध्य हुन्छन्, जसलाई खुट्याउनै सकिन्न भन्छन् मनोविज्ञहरु । त्यसोभए महिलाको भावनालाई कसरी बुझ्ने त ? कोही केटीले आफुलाई मन पराइरहेको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? मनोविज्ञहरुका अनुसार यस्ता केही लक्षणहरु छन् जसका आधारमा महिला आफुप्रति नतमस्तक भएको कुरा पुरुषले ठम्याउन सक्छन् । केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने लक्षणहरु यस प्रकार छन् ।
महिलाले पुरुषको केके कुरामा ध्यान राख्छन्
← तपाईंले मन पराएको केटीलाई सोध्नु नहुने कुराहरु
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हुनुपर्छ ? →
केटीलाई आकर्षित गर्न सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु
मे 28, 2019 मे 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
नोभेम्बर 16, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
नोभेम्बर 29, 2018 नोभेम्बर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक 3
2 thoughts on “केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने लक्षणहरु”
Pingback:श्रीमद्भगवद गीताका १० प्रसिद्ध भनाईहरु
Pingback:यस्तो छ सवैले एकपटक पढ्नैपर्ने गीताको सार